ငတ်မပြေတဲ့ဆားငန်ရေ by koluzoe 537968 views
ပထမဆုံး ကြုံဖူးသူ by babycandy007 42226 views
အလှမပြည့်ခင်ကြွေတဲ့ပန်း by koluzoe 103287 views
စိမ့် by koluzoe 89347 views
သူဌေးကတော်ကြီးနဲ့ကိုလူပျို by koluzoe 54486 views
အချစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲံအိမ်ကလေး by koluzoe 202510 views
ကမ္ဘာကျော်ကြီးကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် ခံစားမှုပေးနိုင်ပါတယ်
Mg Myozaw , Computer DTP at Ozone at Ozone
kaung htet , Medical Epidemiologist at EP ENERGY at EP ENERGY
1. အသက်နှင့်ရမ္မက် ကမ္ဘာကျော်ရတနာဝင်းထိန် သန်လျင်-ကူးတို့သင်္ဘောဆိပ်သို့ ရောက်သောအခါ သူတို့မျှော်လင့်ထားသလို “သီတာ” တစ်နှစ်တို့က မရှိဒေါက်တင်ထားသည်ဆို၍အသင့်ရှိနေသောတိုင်းလုံးကျော် ပေါ်သို့ အပြေးအလွှားတက်ခဲ့ကြရသည်။ သင်္ဘောအပေါ်ထပ်က လူအနည်းငယ်ချောင်သဖြင့် ဦးပိုင်းခရီးဝေးသွားအိပ်ခန်းများနောက် ကပ်လျက်မှာနေရာယူကြသည်။ အဲ………ရုတ်တရက် လေပြင်းဝှေ့လိုက်သဖြင့် ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ထားသော သင်္ဘောဦးက လည်သွားသည်။ လေက ပြင်းလာသည်။မိုးပေါက်လေးများကျလာသည်။ကြပ်သိပ်နေသောခရီးသည်များက တဖက်သို့စုပြုံတိုးဝှေ့နေကြ၏။ဝေလွင်နှင့်ချိုမာတို့တသိုက်ကရီလေးနွယ်ကို ဝင်းနောင်ရင်ခွင်ထဲသို့ မရောက်ရောက်အောင်ဖိတိုးပေးကြသည်။ “ဘာမှန်းလဲမသိဘူး…….တအားတိုးတာဘဲ” “မိုးပက်တယ်ဟ…….”“တောက်…..သူများသားသမီးတွေများ ကောင်းစားနေလိုက်တာ..”“မိုးထဲ လေထဲမှာ အဲဒီအနွေးထည်က အကောင်းဆုံးဘဲ”မထိတထိ နောက်ပြောင်နေကြသော လူငယ်တစ်သိုက်အသံကို အားလုံးကြားနေ
2. ကြသော်လည်း ဂရုမစိုက်ကြချေ။ ဝေလွင်…..ချိုမာ…….သက်သက်နှင့်မိသူတို့ အုပ်စုကသင်္ဘောဦးခန်းဒေါင့်ရှိ ဝင်းနောင်နှင့်ရီလေးနွယ်တို့ အတွဲကိုသာ ဖိတိုးပေးနေကြသည်။ထိုစဉ် အသက်(၃၀)ကျော် ဒေါင်ကောင်းကောင်းနှင့်ကုလားဒိန် တစ်ယောက်က ချိုမာ၏ပြည့်ဝန်းကြီးမားသော တင်ပါးကို မသိမသာဖိကပ်တိုးနေသည်။ ပထမတော့ ချိုမာ သတိမထားမိသေး။နောက်မှ သိသိသာသာကြီး ပေါင်နှစ်လုံးဖြင့်ခွကာ တင်ပါးကြီးကို ကပ်တိုးဝှေ့နေသော ကုလားဒိန်ကို သတိထားမိသွားသည်။ ခိုးလုခိုးလုနှင့်ကြီးမားသော ပေါင်ကြားမှ သူ့လီးကြီးက ချိုမာ့ဖင်ကြားသို့တိုးဝင်လာမှ ချိုမာ ရှက်ဒေါသနှင့်………“ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ….ပါးကြိုးသွားမယ်……..ဟင်း…”အကျယ်ကြီးလဲ မအော်ရဲ။သင်္ဘောပေါ်လူလည်ခေါင် အနှိုက်ခံရသည်ဟူသောပြဿနာမျိုးလဲ ချိုမာ မဖြစ်ရဲ။ “ဆော်ရီးနော်…..မိုးပက်လို့ တိုးမိတာ…..ခွင့်လွှတ်ပါ…”အံမယ် အသံက တကယ့်ပညာတတ် လူ့ယဉ်ကျေးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းပန်တိုးလျှိုးသံမျိုး……..ဟင်း… “…….မိုးပက်ရင် ဟိုဘက်တိုးပေါ့…..နှမချင်းမစာနာ…” “….ဒေါသကအရမ်းကြီးတာဘဲနော်…..ဒေါသအရမ်းကြီးတာမကောင်းဘူး”ခွေးကုလား ချိုမာ့နားဝကိုတိုးကပ်ပြီး ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး…ဝေလွင်မိသူနဲ့သက်သက်တို့က ချိုမာ့အဖြစ်ကို သတိမထားမိကြချေ။ရီလေးနှင့်ဝင်းနောင်
3. တို့ကိုသာစုပြုံတိုးဝှေ့ရင်း နောက်ပြောင်နေကြသည်။ ရီလေးဝတ်ထားသော Hawaii ရှပ်ကလေးပေါ်မှ ပင်လယ်ကမ်းခြေရွက်လှေပြိုင်ပွဲ ဒီဇင်းလေးထဲမှ မောင်နှံနှစ်ဖေါ်ကဲ့သို့ ကပ်ဖိနေအောင်ပင်ိုတိုးဝှေ့နေကြ၏။မိုးက ဝေါကနဲ သည်းသည်းထန်ထန်ရွာသည်။လေနှင့်မိုးရော၍ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပက်သွင်းနေ၏။“ဟိုမှာ သင်္ဘောအလယ်ခုံက အတွဲလဲ ယိုသုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုံ့နှစ်ချပ်လိုခွာလို့မရတော့ဘူးတွေ့လား အဲဒါနင်တို့ မိုးကိုကျေးဇူးတင်။” မိသူက တစ်ဖက်မှ ဝင်ကစ်ပြန်သည်။ဝင်းနောင်ကတော့ ရီလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်းမှ သန်လျက်စွန်းဘက် ပင်လယ်ပြင်ဆီသို့ မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေ၏။ “လေ….အရမ်းပြင်းတယ်….နော်..”သူ့အသံကစိုးရိမ်သံပါသည်။မိန်းကလေးများက သူ့အသံကိုမကြား…..ဝေါကနဲလေနှင့်မိုးတချက် ပက်သွင်းလိုက်တိုင်း စီကနဲညံအောင် အော်လိုက်ကြသည်။ချိုမာတစ်ယောက်တော့ ပြဿနာတက်နေရသည်။ဗလကောင်းကောင်းလူရည်သန့်သန့် ကုလားကလည်း မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ မိုးပက်သွင်းလေတိုင်း ချိုမာ့ဖင်ကြီးကို သူ့ပစ္စည်းကြီးဖြင့် အတင်းခွတိုးနေ၏။ ထီးပါသူက ထီးဖွင့်ကာသည့်နှယ် မိုးကာပါသူတွေကလည်း မိုးကာကို ခေါင်းမြီးခြုံကာ ကုတ်နေကြသည်မို့ ချိုမာနှင့်ကုလားဒိန်အဖြစ်ကို သတိမထားမိကြ။ချိုမာ့တစ်ကိုယ်လုံး နတ်ပူးနေသလို တုန်ယင်လာသည်။ရှက်စိတ် ကြောက်စိတ်ဖြင့်လည်း အသံက မထွက်တော့….တောက် ဒီနေ့မှ
4. အောက်ခံဘောင်းဘီလေးလဲဝတ်မလာမိ သင်္ဘောလက်ရမ်းကို ကျစ်ကျစ်ကိုင်ပြီးဘေးစောင်းလှဲ့၏။ထိုအခါမှ ကိုရွှေကုလားက ပေါ်တင်ကြီးကိုနို့နှိုက်လေ၏။“အိုး……..ရှင်………ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ…..”“မင်းနို့လေးတွေက ကိုင်ချင်စရာ လုံးကျစ်နေတာကိုး….”“ရှင်……ရှင်……မစော်ကားနဲ့နော်…..ကျမ…အော်လိုက်မှာ…” ကုလားလက်တွေက သိပ်ကျွမ်းကျင်တယ်။ချိုမာ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အင်္ကျီအပေါ်ကနေရှာတွေ့နိုင်တယ်။ခပ်ညှစ်ညှစ်လေး ဆတ်ကနဲခြေပြစ်လိုက်တယ်။ချိုမာ့ရင်ထဲ မိုးကြိုးပြစ်လိုက်သလို ဒိန်းကနဲ ခုန်ဆောင့်သွားပြီး ဒူးတွေ ညွတ်ချင်သွားတယ်။“ဝေါ….ဝေါ…….ဝူး…..ဟေး…….ဟေး…”မိုးသံလေသံတွေနဲ့ ခရီးသည်တွေအသံက ဆူညံနေတယ်။သင်္ဘောတစ်ဖက်ထဲကိုစုပြုံတိုးဝှေ့နေကြသည်။ ကုလားက သူ့ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ ချိုမာ့မျက်နှာလေးကိုဆွဲဖုံးလိုက်သည်။ချိုမာရုန်းကန်ဖယ်ရှားဘို့ အချိန်မရခင်မှာဘဲ ပူနွေးတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေက ချိုမာ့နှုတ်ခမ်းပါးလှပ်လှပ်လေးကို အုပ်ယူ ငုံခဲပြီးစုပ်နေတယ်။“ပြွတ်….ပြွတ်……ဟင်း…”“ဝေါ……..ဝူး……ဟေး……..သင်္ဘောစောင်းနေတယ်ဟေ့…..ချိုမာတချို့အသံတွေကြားတယ်…….တချို့မမှတ်မိတော့ဘူး…..ချိုမာ့နှုတ်ခမ်းကို အကြာကြီးစုပ်နမ်းနေတဲ့ကုလားဒိန်ဟာ ချိုမာ့ဖင်ကြားထဲသို့ မာတောင်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကိုပါ ထိုးသွင်းချလိုက်ပါတယ်……..လူကြားသူကြားမှာ ချိုမာ့မာ ရှက်လိုက်တာ…….
5. “ဝေါ…….ဝူး……..အပေါ်ထပ်က လူတွေ မျှထိုင်ကြပါ….” သင်္ဘောအမှုထမ်းတွေပြာယာခပ် ပြေးလွှားအော်ဟစ်နေကြတယ်။တစ်ဖက်တည်း စုပြုံတိုးဝှေ့တဲ့ ခရီးသည်တွေကိုလဲ မျှထိုင်ကြဘို့ လိုက်ပြောနေကြတယ်။“ပြွတ်…..ပြွတ်…….မင်းလေးကို လိုးချင်လိုက်တာကွာ..”သေရေးရှင်ရေးကြားမှာ ကုလားက နှာထနေသည်မို့ ချိုမာသူ့ရင်ဘတ်ကိုဆောင့်တွန်းပြီး…….“ရှင်….ရှင်…..အရမ်းလွန်နေပြီနော်…..ကျမ…..ကျမ…အင့်…”“ပြွတ်……ပြွတ်…….ပြွတ်…..” ချိုမာအသံမထွက်တော့ဘူး။ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုလားရဲ့နှုတ်ခမ်းစုပ်ခြင်းကို ခံလက်ရတယ်ိုဆိုရင်ဘဲ ဆီးခုံလေးမှာ ဖိန့်ဖိန့်တုံအောင်မောက်ကြွပြီး ခြေဖျားလေးတွေမြောက်တက်သွားရတော့တယ်။မိုးနှင့်လေကလည်း ပြင်းထန်လာပြီး သန်လျှင်ဘက်ကမ်းကပန်းတန်းတွေနဲ့နီးကပ်နေတယ်ဆိုတာလောက်တော့ ဝင်းနောင်ခန့်မှန်း၍ရသည်။ သန်လျင်ရေနံချက်စက်ရုံကို မှုံမှုံဝါးဝါးမြင်လိုက်ရပြီ…….ဝေါ…….ဝေါ…..ဝူး….ဟေး……..သတိထားကြ…..သင်္ဘောမှောက်ပြီ…..လှိုင်းပုတ်သံကြားနေရတယ် ဝမ်းဗိုက်ထဲကိုရေတွေဝင်နေလို့ မအီမလယ်ကြီးခံစားနေရတယ်။မျက်လုံးကို အားယူပြီးဖွင့်လိုက်တော့ အသက်ကယ်ဗောဘေးမှာကိုရွှေကုလားက လုံချည်မရှိဘူး…..ပက်လက်ကြီး…..ဓနိပင်တွေက အုပ်နေတယ်……ဟယ်……ချိုမာ ထဘီလဲမရှိတော့ပါလား။ဒုက္ခဘဲ……ပြဿနာ ကုလားဆီးခုံဟာအမွှေးတွေထူထပ်မဲနက်နေတယ်…..။
6. သူ သတိရနေပုံရတယ်။ချိုမာ့ကိုယ်လဲ သူကယ်လာပုံဘဲ……….။“ဒီမှာ……….ရှင်သတိရလား…….ဟင်”ချိုမာအရဲစွန့်ပြီးမေးလိုက်ရတယ်…..ဖင်ပိုင်းကိုရေထဲမှာနှစ်ထိုင်ထားပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကိုပူးကပ်ထားတယ်။“ကိုယ်….သတိရတာကြာပြီ…..အမိ…..သတိလစ်နေတာကြာပြီ….”“အို…..ဟင်……ဒါဖြင့်…….ရှင်…..”“ဟုတ်တယ်……..ကိုယ်….မင်းကို တချီလိုးပြီးသွားပြီ….”ချိုမာ ရှက်ဒေါသနဲ့ သူ့မျက်နှာကို ရွှံ့တွေနဲ့ကောက်ပေါက်ပြစ်နေမိတယ်။သူမရှောင်ဘူး.။ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ခလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်နေပုံမျိုးနဲ့ ကြည့်နေတယ်….။ ချိုမာ့လက်တွေ ညောင်းကိုက်လာတဲ့အထိ သူ့ကိုရွှံ့တွေနဲ့ကုတ်ခြစ်ပြီး ပေါက်လို့အားရတော့ ဟီးချပြီးငိုပြစ်လိုက်မိသည်။ “ရက်စက်လိုက်တာ……..ရက်စက်လိုက်တာ….”ပါးစပ်မှ သည်စကားကိုလဲ ထပ်ခါထပ်ခါရွတ်ဆိုမိတယ်။ကုလားက ချိုမာ့ပုခုံးလေးကိုညင်ညင်သာသာလေးကိုင်ရင်း……………….“ချစ်လို့ပါခလေးရယ်……ကိုယ့်အပြစ်ကိုဝန်ခံပါတယ်…..နှစ်ယောက်အတူတူဗောနဲ့မျောလာပြီး ဒီမှာလာတင်နေတော့ မင်းမှာလဲ ထဘီမရှိ……ကိုယ်လဲလုံချည်မရှိဆိုတော့လုပ်မိတာပါ…..ခွင့်လွှတ်နော်……..နော်…….ခလေး…”ဂုတ်သားဖွေးဖွေးကို ယုယုယယလေးဒူးထောက်နမ်းနေတဲ့ကုလားပေါင်ကြားကလီးကြီးဟာ နွံတွေရွံ့တွေနဲ့ မတ်ထောင်ပြီး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုံနေတယ်…။
7. ချိုမာ့မျက်စိဟာ လီးကြီးကို စွေစောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။လုံးပတ်…..အရှည်တွေဟာရင်စို့ချင်စရာ တုတ်ခဲရှည်လျားတယ်။ဒါ….ဒါကြီး…..ငါ့စောက်ပတ်ထဲလိုးဝင်ပြီး…ပြီ..တဲ့။စောက်ဖုတ်ကြီးဟာ အလိုးခံထားရလို့ထင်ပါရဲ့…..နွံတွေထဲမှာ နစ်ပြီးပုန်းကွယ်နေသည်။ ချိုမာ အားရပါးရ ငိုပြီးမောလာသည်။အလိုလိုပျော့ခွေလာပြီး ကုလားရင်အုပ်ကြီးထဲကို လှဲချမှီတွယ်လိုက်တယ်။ ကုလားက ဗောကွင်းကြီးကိုယူပြီး ချိုမာ့ဖင်အောက်ကိုထိုးထဲ့ပေးတယ်….ထိုင်ဘို့ပေါ့လေ။ မထူးတော့ဘူးလေ……ချိုမာအပျိုပြန်ဖြစ်မှာမှ မဟုတ်ဘဲ ဝမ်းနည်းနေလို့ကောဘာထူးအုံးမှာလဲ။ အသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့တာပဲ…….တော်လှပြီလေ။ရီလေးတို့ ဝေလွင်……မိသက်နှင့်မိသူ ကိုဝင်းနောင်တို့ရော အန္တရာယ်ကင်းကြရဲ့လား။ မိမိလက်ရှိအခြေအနေကလဲ ကုလားသနားမှ အသက်ချမ်းသာရမည့်အနေအထားချိုမာ ကြားဖူးခဲ့သည်။တွံတေးတူးမြောင်းအတွင်း သင်္ဘောနစ်စဉ်ကဆောင်းအငြိမ့်မင်းသမီး ဝင်းဝင်းအေးအား ရေထဲမှ ဆယ်ယူပြီး မုဒိမ်းသမားလေးယောက် စိပ်ပြေနပြေ အားရအောင် စပ်ယှက်ပြီးမှ သတ်ပစ်လိုက်သော သတင်းကိုလှစ်ကနဲ သတိရလိုက်သည်။ ယခုလည်းဤကုလားကို ကလန်ကဆန်လုပ်နေခြင်းထက် အလိုက်သင့် ဆက်ဆံစပ်ယှက်ခြင်းကို ခံလိုက်ခြင်းက ချိုမာ့အတွက် အခြေအနေကောင်းများဖန်တီးယူနိုင်သည်။ ကုလားထိုးပေးသော ဗောကွင်း အလယ်ကိုဖင်ထိုင်ချလိုက်သောအခါ ပေါင်နှစ်ဖက်က အလိုအလျောက်ဘေးသို့ ကားတင်ထားသလို ပြဲနေသည်။ရွှံ့နွှံများ ပေကျံနေသော
8. ချိုမာ့ပေါင်များ၊ဗိုက်သားများကို ရေနှင့်ပက်ဆေးနေသော ကုလားမျက်နှာကတကယ်ကြင်နာယုယနေဟန် ထင်ရှားနေ၏။ဗောကွင်း တစ်ဖက်ဆီကို လက်နှင့်ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း ကုလားလုပ်သမျှကို တွေတွေလေးကြည့်နေသော ချိုမာ့မျက်နှာမှာရှက်ခြင်း၊အားနာခြင်း၊ထိတ်လန့်ခြင်းတို့ ရောထွေး ယှက်သန်းနေသည်။ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ဝေဒနာပေါင်းစုံခံစားနေရသည်။ ကုလားက နွံထဲတွင်ဒူးထောက်ရင်း ချိုမာ့စောက်ဖုတ်ကြီးအား မြစ်ရေဖြင့်ကုန်းကုန်းပက်ခါ ပွတ်သပ်ဆေးကျောနေ၏။ပင်ကိုယ်အသားဖြူဖွေးစွတ်နေသောချိုမာ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ သာမန်မိန်းကလေးများ စောက်ဖုတ်ထက်(၂)ဆခန့်ကြီးနေလေသည်။“ဘာလို့….ဟို…..ရေဆေးနေတာလဲလို့……”“ယက်ပေးမလို့လေ……မကြိုက်ဘူးလား….ဟင်…..”“ဟာ….သေရေးရှင်ရေး…ကြားထဲမှာ…ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…”“သေရေး…..ရှင်ရေးမို့ လုံချည်မပါ…..ထဘီမပါဘဲလျှောက်ပြေးနေတာထက်ဒီလိုလူသူကင်းတဲ့နေရာလေးမှာ အားရပါးရလိုးပြီးမှ ဘာလုပ်ကြမလဲ………ဘယ်သွားကြမလဲ စဉ်းစားကြရတာက ပိုပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိတာပေါ့….” ချိုမာ ပေါင်နှစ်လုံးကို စေ့ပြစ်လိုက်ရင်း ခေါင်းခါလိုက်၏။“ရှင်……အားရအောင်လုပ်ပြီးပြီဘဲ…..ရှင…..တော်ပါတော့……..”်“ကိုယ်မှမဝသေးတာ မင်း အေးအေးဆေးဆေးအလိုးခံရင် ကိုယ်မင်းအတွက်အစစအရာရာ တာဝန်ယူမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မင်းတစ်ယောက်ထဲ ဓနိတောထဲမှာနေခဲ့ပေတော့…….အေး…..မသမာသူ(၁၀)ယောက်လောက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင် မင်းပစ္စည်းလေး စုတ်ပြတ်သွားမယ်…….အစဉ်မသင့်ရင်လဲ ရေထဲမျောပစ်ချင်မျောကြမှာ….”
9. “………အို………..တော်စပ်းပါ……”ကုလားပစ်မှတ်က ချိုမာ့ရင်ကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်သည်။ထိတ်လန့်တကြားကုလားစကားကို လှမ်းပိတ်ရင်း ခြောက်ခြားစွာ ဝဲယာသို့ မျက်လုံးဝိုင်းလေးနှင့် ကြည့်၏။ဘယ်ကြည့်ကြည့် ဓနိတောက ပိတ်အုပ်နေလေသည်။ တညင်ဘက်ကမ်းဆိုသည်ကိုတော့ ယေဘုယျတွက်မိသည်။ရန်ကုန်ဘက်ကမ်းတွင်ဓနိတောမရှိ။ဘယ်နေရာရောက်နေသလဲဆိုသည်ကိုလဲ မဝေခွဲတတ် ခက်သည်ကမိုးသည်းထန်နေဆဲပင်……….။“ကျမတို့ အအေးပတ်ပြီး သေကုန်လိမ့်မယ် သိလား……” သူ့ကြည့်ရတာ လီးကြီးတစ်ကိုင်ကိုင်ဖြင့် ချိုမာ့ကို လိုးရန်သာအာသာပြင်းပြနေဟန်ရှိသည်။တခြားဘာကိုမျှ တွေးတောမိပုံမရချေ။ချိုမာ နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ထားလိုက်၏။ဒေါသမျက်လုံးစူးစူးလေးဖြင့် သူ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်လိုက်၏။ရင်ဘတ်မှ လမွှေးအုံကြီးအထိ အမွှေးတွေကဆက်နေသည်။ကြီးမားခိုင်ခန့်သောရင်အုပ်ကြီးကြားမှ ရင်ဘတ်မွှေးကြမ်းကြီးများက ချိုမာ့နို့ကြီးများကို ခွလျက် မထိတထိပွတ်သပ်နေသည်။ အမွှေးကြမ်းကြီးများ အထိအတွေ့က ချိုမာ့ရင်ကို ဖိုကနဲ လှိုက်ကနဲ ခံစားနေရပြီးမဲနက်ကြီးမားသော သူ့လီးကြီးက ဗိုက်ကို၎င်း ပေါင်ခြံနှင့်ဆီးခုံမို့မို့လေးကို ၄င်း တရွရွပွတ်သပ်ပေးနေပေရာ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထရင်း လက်နှစ်ဖက်က ဗော့ကွင်းကိုသာခွကိုင်ကာ တွန့်လိမ်ကော့ပျံနေမိရှာသည်။ မြစ်ရေက ဝေါကနဲတက်လာလိုက် ပြန်ကျသွားလိုက်ဖြင့် ဆူညံနေသကဲ့သို့မိုးနှင့်လေကလည်း မရပ်မနားတမ်း တိုက်ခပ်ရွာသွန်းလျက်ရှိနေပြန်ပါသည်။သဘာဝသည် သူ့အား အလိုတူအလိုပါ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပေးနေသည်။
10. သူ့အသက်ရှုသံက ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။စောက်ဖုတ်ကြီးကို တဝကြီး ငုံကြည့်နေသောသူ့မျက်လုံးများက ဝင်းလက်တောက်ပနေသည်။ယခု အချိန်တွငသူ့လက်ထဲရှိ ချိုမာ့်ကိုယ်ခန္ဒာကို လုပ်ချင်သလိုသာလုပ် ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရုံပဲတတ်နိုင်သည်။ ထူအမ်းအမ်းစောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားကို သူကပူနွေးစိုစွတ်သောလျှာကြမ်းကြီးဖြင့်“ပြွတ်”ကနဲလျက်လိုက်လေရာ နွေးကနဲဖြစ်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ပြင်ကြီးမှာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရ၏။ချွန်မြသောလျှာကို စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကြားသို့ထိုးသွင်း၍ အကွဲကြောင်းအတိုင်း ဆုန်ချီဆန်ချီ ယက်နေပြန်ရာ ချိုမာမှာ တင်းမထားနိုင်တော့ဘဲစောက်ပတ်လေး ဟစိ…ဟစိ…ဖြစ်သွားရပြန်လေသည်။စင်စစ်ချိုမာသည် လီးနံ့ပင်မရဘူးသေးသော အပျိုစင် အပျိုစစ်စစ်လေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ စောက်ဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး အယက်ခံရလေသောအခါ မရိုးမရွခံချင်စိတ်မှာ တားမရဆီးမရ ပြင်းထန်လာပေရာ လက်ဖြူဖြူလေးများက ကုလား၏လီးအား မရဲတရဲလှမ်းကိုင်ရင်း ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိလေသည်။ ကုလားကလဲ ချိုမာ ခံချင်လာမှန်းသိလိုက်သည်နှင့် လီးကြီးကို ချိုမာ့စောက်ဖုတ်ကြီးအပေါ်သို့ တေ့တင်ပြီးပွတ်သပ်နေ၏။“အင့်….အင်း…..အ….အား……ကျွတ…ကျွတ…..ဟင်း….ဟင်း…”် မရှိးမရွခံစားနေရသော ချိုမာ့မျက်နှာလေးမှာ ရေစိုနေသောဆံနွယ်များ ဖယိုဖရဲဖုံးအုပ်ထား၍ တမျိုးပင်လှပနေပြန်ပါသည်။ကုလား၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးများကမို့မောက်လုံးကျစ်နေသော ချိုမာ့နသီးခေါင်းလေးများကို ငုံခဲပြီး လျှာဖြင့်ကလိပေးနေပြန်ို့ရာ ချိုမာ မနေတတ်တော့ပါ………..။“…..အောင့်မလေး….နော်….အင်း….ဟင်း…ဟင်း…….ကျွတ်…ကျွတ……အား..”်ဓနိတောကိုဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော မိုးသက်လေပြင်းက ချိုမာ၏ဝေဒနာကို
11. ပျက်ရယ်ပြုနေသယောင် ဆူညံစွာမြည်ဟီးနေသည်။သူ့မျက်နှာမှ ခံစားမှုကလည်းတဖြေးဖြေး အရှိန်မြင့်မားလာဟန်တူသည်။ပါးစပ်မှ “ဟင်း ဟင်း” ဟူသောအံကြိတ်ထားသည့်ကြားမှ ပေါက်ကွဲလွင့်စင်လာသော ကာမဓါတ်လွှမ်းခြုံမှုကအရှိန်ပြင်းစွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ချိုမာ သူ့မျက်နှာကို မဝံ့မရဲလေးမော့ကြည့်မိသည်။အငမ်းမရလှုပ်ရှားနေသော်လည်း သူ့အမူအယာကမတရား အနိုင်ကျင့်လိုစိတ်ကင်းမဲ့နေသည်။တစ်ခါတရံ ချိုမာ ဆတ်ကနဲ ခါးလေးကော့တက်သွားလေတိုင်း လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှရပ်တန့်ပြီး ချိုမာအား……နာသွားသလား……..ဆိုသော အကြည့်မျိုးလေးဖြင့်ကြည့်တတ်သည်။ လုံးပတ်ကြီးမားလှသော သူ့တန်ဆာကြီးမှာ ချိုမာ့စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်ပြီးပြီဟုသူပြောလို့သာ ချိုမာယုံရသည်။ဤထုထည်ပမာဏနှင့် ချိုမာ့ပစ္စည်းလေးမှာ ဘယ်လို့မှဘယ်သို့မှ မတန်မရာဖြစ်သည်။ဒစ်အထက်ပိုင်း လိင်တန်ခေါင်းကြီးက နီရဲပြောင်တင်းလျှက် လိင်တန်တစ်ခုလုံးကို ငိုက်မှေးနေအောင် လေးလံကြီးမားလွန်းလှသည်။ကုလားလူမျိုးပီပီ သူ့လိင်တန်တစ်လျှောက် အမွှေးအမျှင်များ ကျိုးတို့ကျဲတဲပေါက်နေပုံကြီးက ချိုမာ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပွတ်သပ်နှိုးဆွအားကောင်းလေမည်လည်းဟု တွေးကြည့်ရုံနှင့် ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထချင်စရာ ကြီးမားမာတောင်နေ၏။ အကြောကြီးများ ထောင်ထနေသော လိင်တန်တစ်လျောက်အချို့နေရာများတွင် ရွှံ့နွံများပေကျံနေဆဲပင်ရှိသေးသည်။ရေရှည် ကလိခြင်းနှိုးဆွခြင်းကို ချိုမာ မခံချိ…….မခံသာ မအီမလည်ကြီးဖြစ်လာသည်။စောက်ခေါင်းလေးထဲမှ စိမ့်ကျင်ပြီး ဆီးသွားချင်စိတ်ကိုပင် မနည်းထိန်းထားနေရ၏။ “ဆီးသွားချင်လာပြီ…” မတတ်သာသည့်အဆုံး ချိုမာ ရှက်ရှက်နှငသူ့အာ့း်ပြောလိုက်၏။“…..ပေါက်ချလိုက်ပေါ့…….ဘာဖြစ်လဲ……ပေါက်လေ……”
12. “……..အာ……..ထိုင်ပြီးပဲ…….ပေါက်တတ်တယ်…..”“….ဒီလိုပဲ ပေါက်လိုက်လဲရတာပဲကွာ….” သူ့အမူအယာက လူပမာတစ်ဦးကို ချော့မြူပြောဆိုနေသည်ကဲ့သို့၎င်း…..စိတ်ကောက်နေသော ခလေးတစ်ယောက်ကိုသေးတည်နေသကဲ့သို့၎င်း ညင်သာ၍ ဂရုဏာပြည့်လှလေ၏။ နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ယောက်လိင်အင်္ဂါကို တစ်ယောက်ရှင်းလင်းစွာ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေရာမှ သေးပေါက်တာလောက်တော့ ရှက်စရာမဟုတ်တော့ဟု ချိုမာသဘောထားက ဗော့ကွင်းလေးအတွင်း ပက်လက်ကလေးထိုင်ရင်းမှပင်သေးပေါက်လိုက်ရ၏။ သူက စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို အသာလေးဖြဲပေးထားရာ ယခုကဲ့သို့သေးပေါက်ရသည်မှာ အရသာရှိကြောင်း ချိုမာတစ်ခါဖူးမှ မခံစားခဲ့ရဘူးချေ။ စောက်စိလေးမှ သေးများ တသွင်သွင်ကျဆင်းလာနေသည်ကိုပင် သူကမမြင်ဖူးသည့်အလား အတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေရာ ချိုမာ့ခမျာ သေးကို မနဲကြီးညှစ်ပြီးပေါက်လိုက်ရလေသည်။“……ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး……..သေးပေါက်တာလဲ ကြည့်နေတာပဲ…” ဟု ချိုမာကသူ့ပုခုံးကို ဆတ်ကနဲတွန်းရင်း မာန်မဲသလိုပြော၏။သူက ရှက်မျက်နှာကြီးဖြင့် ဟီးကနဲတစ်ချက်ရယ်လိုက်သည်။ “ဖင်ကို နဲနဲကြွထားနော်…..ဒါမှ လီးဝင်တဲ့အခါမနာမှာ”“….ဟင် လုပ်မလို့လား..” “….အင်းလေ……..လိုးကြရအောင်….သိပ်ချမ်းလာပြီ”သူကအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ချိုမာ့ကို စလိုးပါလေပြီ။လီးထိပ်ကြီးက အဆမတန်ကြီးမားနေသဖြင့် မဝင်ပဲတစ်နေရာ ချိုမာက စောက်ပတ်ကို အသာ မရဲတရဲဖြဲပေး၏။“…ပြွတ်….ပြစ်…”…”…..အီး……အီး….အ….အား…..မဝင်ဘူး…မဝင်ဘူး….”
13. “……မဝင်ဘူး……အား….အား….နာတယ်….အရမ်းနာတယ်…..”မဝင်ပါ လုံးဝကြီး အပေါက်နှင့်မတည့်သော လီးထိပ်ကြီးက ချိုမာ့ စောက်ခေါင်းအဝတွင်တစ်တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်နေ၏။ သူက လက်မလျှော့ ချိုမာ့စောက်စိလေးကို ကဗျာကယာတထုတ်ထုတ် မြည်အောင် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ကျင်စိမ့်သွားသော အရသာကိုစောက်စိလေးမှ ခံစားနေရ၍ ချိုမာမျက်စိ့လေးမှိတ်ခါ အံကြိပ်ခံနေစဉ်…… “ဗြစ်…..ပြွတ်…..အား……အား….” ရုတ်တရက်ကြီး သူ့လီးကို ဆောင့်သွင်းချလိုက်လေသည်။မဆန့်မပြဲကြီးဝင်သွားသဖြင့် နာကျင်လှသော်လည်း စောက်ပတ်အတွင်းပိုင်းမှ မခံစားဘူးသောကာမအရသာထူးခြားမှုကို “ရှီး” ကနဲ ပါးစပ်မှ အသံထွက်အောင်ခံစားလိုက်မိလေတော့သည်။အပြင်လောက၏ သဘာဝအအေးဒါဏ်သည် အံသြဖွယ်ကောင်းလှစွာ လွင့်ပျံကွယ်ပျောက်သွားကြပြီးထူးဆန်းသော ကာမဓါတ်အပူရှိန်များကစောက်ပတ်ဝမှတစ်ဆင့် ကိုယ်အနှံ့အပြား ပူနွေးဖိန်းရှိန်းလျက် စီးဝင် ပျံနှံ့သွားလေရာချိုမာ့လက်များက ထိုကုလားဒိန်၏ အမွှေးထူလဗြစ်နှင့်ဖင်ကြီးအား ကုတ်တွယ်ဖက်ထားမိကာ ငရံ့ပြာလူး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေပေတော့သည်။ “…ပြွတ်….စွတ…..ဖွတ်…..ပြွတ်…” “…..အား……အင်း…..ဖလူး….ဖူး…အင်းအင်း” ကုလားဒိန် ဆောင့်ချက်တိုင်း အသက်ပါသွားမတတ်ပြင်းထန်လှပါသည်။ချိုမာ့ကဲ့သို့ အပျိုစင်လေးကိုမဆိုထားဘိ ခလေးတစ်ယောက်အမေပင်စအိုရှုံသွားအောင် ပြင်းထန်လှသော လိုးချက်များဖြစ်ရာ ချိုမာ့ခမျာ သတိမေ့မျောမတတ် ဖျတ်ဖျတ်လူးလျက် မချိမဆန့်ခံစားနေရပါလေသည်။“…..ဖြေးဖြေးလုပ်ပါရှင်….ကျမအသက်ပါထွက်သွားအုံးမယ်….အမလေးနော်…အင်း…ဟင်း….ဟင်း…ဟင်း….အား….အား…”“…..အစမို့လို့နာနေတာပါကွာ နောက်တော့ချောင်သွားမှာပါ မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးက နဲနဲ
14. နောနောမှ မဟုတ်တာ……”“……ဒါနဲ့ ရှင်ပြောတော့ ကျမသတိလစ်နေတုံး ရှင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆို ဘာလို့အခုအရမ်းကြပ်နေလဲ…..”“……အလကားပြောတာပါ…..မင်းမခံမှာစိုးလို့ ကိုယ်ပြောတာ မင်းသတိရတော့မင်းစောက်ဖုတ်မှာ ရွှံ့တွေပေနေတဲ့ဥစ္စာ မင်းသတိမထားမိလို့ပါ”“…ကြည့်စမ်း အ….အ…..လူလယ်ကြီး….ဟင်း ဒီကသတိလစ်နေတုန်းလိုးပြီးသားပဲလေမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ခံတာ သိလား……ဟွန်း….”“……ဟဲ ဟဲ အခုတော့ ခံလို့ကောင်းနေပြီမို့လားကွာ…”“……တော်ပါ…လူကိုညာလိုးတာ….သိပ်မုန်းတယ် သိလား…”“အဲဒီ….ညာ….လိုးရတဲ့အရသာမှ ပိုကောင်းတာ သိလား…ဟားဟား..”“ပြွတ်…..ပြွတ်…..စွတ်….စွတ….ဖွတ်…”်“အ……အင့်….အင့်…အာ….အား……….ဟင်း….ဟင်း……ဟင်း….ကျွတ်…..ကျွတ….”်ကုလားဒိန်ဆောင့်လိုက်တိုင်း လီးကြီးကရှည်လျားလွန်းသောကြောင့် မသိမသာကွေးသွားပြီးမှ “ပြွတ်”ကနဲဝင်သွားလေ့ရှိရာ ချိုမာ့ခမျာ အသဲနှလုံးကို လက်တံရှည်ရှည်ကြီးဖြင့် ဆတ်ကနဲ ဆွဲနှုတ်ခံလိုက်ရသလိုဆက်တိုက်ကြီးခံစားနေရပြီး မနားတမ်းဆောင့်လိုးလိုက်သော လီးကြီးဒဏ်ကြောင့် စောက်ပတ်လေးမှာ ကျိန်းစပ်နာကျင်လာပြီးစောက်ခေါင်းအတွင်းမှ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကောင်းသောအရသာကို သွားလေးများကျစ်ကျစ်မြည်အောင် ခံစားရင်း သုတ်ရေများပင်ပန်းထုတ်လိုက်မိလေတော့သည်။ကုလားဒိန်၏လီးမဲမဲကြီးမှာလဲ ချိုမာ၏သုတ်ရေများဖြင့် သံမဏိချောင်းကြီးပမာပိုမိုမာတောင် ပြောင်တင်းလာပြီး မကြာခင် ဝင်းကနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်ခါ စူးရှပြင်းထန်သော အရှိန်ဖြင့် ချိုမာ့ စောက်ပတ်အတွင်းသို့ လီးရေများပန်းထည့်လိုက်သည်
15. ကို ပူကနဲ……ပူကနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထား မိကြလေတော့သည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀မိသူ ဇဝေဇဝါဖြင့် ဆွဲမိဆွဲရာကို ဆွဲလာမိသည်။မြစ်ရေ နောက်ကျိကျိတို့က ခေါင်းကိုမကြာခဏ ဖုံးလွှမ်းစေသဖြင့် အသက်ရှုမှားမတတ် ခံစားနေရ၏။ သက်သက်နှင့်မိသူ မလှမ်းမကမ်းမှ သက်ကယ်ပျဉ်ချပ်ကြီးကို ဆွဲကိုင်မိကြသည်။အလားတူ ဆွဲကိုင်လာသူများကြားဝယ် အသက်ငါးဆယ်ခန့်တရုပ်ကြီးမှာလဲဖြူဖတ်ဖြူရော် မျက်နှာဖြင့် ပါးစပ်မှ တွေ့ကရာ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ငရဲပွက်နေသည်။ငိုသံအော်ဟစ်သံ စူးစူးရှရှအော်နေရင်းမှ ရေမွန်းသွားတော့ ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်သံများဖြင့် ရှုပ်ရှုက်ခပ်နေလေသည်။မိသူနှင့်သက်သက်တို့ ဆွဲကိုင်မိထားသော အနီအဖြူကြား ဆေးသုတ်ထားသောအသက်ကယ် ပျဉ်ချပ်ကြီးသည် သင်္ဘောမှောက်ချိနတွင်အဝေးကို လွင့်စင်သွားဟန်တူသည်။တွယ်ယူသူ နည်းပါးလှသည်။ မိသူမျက်နှာလေးမှာ အားရပါးရ အော်ဟစ်ပြီး အကြောက်လွန်ကာ ငိုကြွေးထားသောကြောင့် မျက်ခွံလေးများမို့အမ်းနေသည်။တစ်ချီတစ်ချီ ဝေါကနဲ ပုတ်တင်လိုက်သော လှိုင်းအရှိ်န်ကြောင့် လက်မှဆွဲကိုင်ထားသော အသက်ကယ်ပျဉ်ချပ်ကြီးလွတ်မထွက်ရန် တင်းတင်းကြီး ကိုင်ထားနေရသည်။ငိုချင်စိတ်ဖြင့်လည်းမျက်နှာလေးမှာ အားကိုးရာမဲ့ ငိုမဲ့မဲ့လေးဖြစ်နေရှာလေသည်။မိသူမှာ တရုတ်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး အဖေတရုတ်၊အမေတရုတ် စစ်စစ်ဖြစ်ရာ တရုတ်စကားကိုလည်း ကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်သူဖြစ်လေသည်။ “မိသူ…..နင့်ဘေးက တရုတ်ကြီးကို အကပ်မခံနဲ့ ကြောက်အားလန့်အားဖက်လိုက်
16. ရင် နှစ်ယောက်လုံးနစ်သွားလိမ့်မယ် ငါပြောတာကြားရဲ့လား သက်သက်ကအားကစားမယ်ပီသစွာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသည်။အခြေအနေကို ယထာဘူတကျကျခေါင်းအေးအေးဖြင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ပညာရှိမကြီး သတိပေးချိန်မှာ မိသက်အတွက် သိပ်နောက်ကျခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်။ရေအောက်ထဲတွင် တရုတ်ကြီး၏အောက်ပိုင်းက မိသက်ဖင်ကြီးကိုမညှာတမ်းဖိကပ်တွယ်မိသွားသည်။ ရေနစ်နေသူဝါးကို ထိုးမည့်သူတွေကလဲ ပေါပါဘိ မိသက်ကြိုးစားရုန်းကန်သော်လည်း တရုတ်ကြီးက တကယ်ဘဲကြောက်ရွံ့လေသလား တမင်ပြုလေသလားတော့မသိ……မိသက်၏နောက်မှ ကျောပိုးအိတ်လို ပိုးပြီးခွထား၏။ မိသက် လက်ကလည်းမလွှတ်ရဲသဖြင့် တရုတ်ကြီးအား တတောင်ဆစ်ဖြင့်သာတွန်းဖယ်ရုံသာပြုနိုင်လေသည်။ “…..ဦးလေးကို ကူညီပါကွာ….ဦးလေး ရေမကူးတတ်လို့ပါ……”တရုတ်ကြီးအသံက တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်ရှိလှသည်။“ဦးလေးလက်ကြီးက ဒီပျဉ်ချပ်ကြီးကို ကိုင်ပါလား ဘာလို့ ရေနစ်သူချင်းလိုက်တွယ်နေရတာလဲ အကုန်သေကုန်လိမ့်မယ် သိလား….” ကြောက်စိတ်ကြားမှ ဒေါသလေးက ခေါင်းထောင်လာသည်။သက်သက်ကလည်းအခြေအနေကို အကဲခပ်မိဟန်တူသည်။အသက်ကယ် ပျဉ်ချပ်တစ်ဘက်မှ မိသက်တို့ရှိရာသို့ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် စောင်းသွားလိုက်ဖြစ်နေသော ပျဉ်ချပ်ကြီးကို ဖက်တွယ်ပြီးရောက်လာသည်။“…..ဦးလေးက ယောက်ျားကြီးပဲ ကိုယ့် ဘာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွယ်ပါလားအရေးထဲမှာ အခွင့်အရေး မယူစမ်းပါနဲ့…” တရုတ်ကြီးမျက်နှာ ဟင်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။
17. သက်သက်ကိုလဲ ဒေါသမျက်လုံးဖြင့် ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။“….ငါ တကယ်ရေမကူးတတ်လို့ ဖက်မိတာပဲ နင်တို့က ငါ့ကိုအရမ်းစွတ်စွဲနေကြတာဘဲ”မိသက်(ကူကူး)လည်ပင်းမှ တရုတ်ကြီးလက်က ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အသက်ကယ်ဗောပျဉ်ချပ်ကြီးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်သည်။လှိုင်းတစ်လုံးဝင်အဆောင့်နှင့်ကြုံလိုက်ရသည်။“ဟင်……လူကြီးပြီး….အချိန်မစီးတဲ့ခွေးကြီး….ကဲ…ဖြန်း…”ကြက်ခြင်းထဲမှ ကြက်များအချင်းချင်းတခွပ်ကြသည်ကို မြင်ဖူးကြပေလိမ့်မည်။အန္တရာယ်စက်ကွင်းသို့ စုံးစုံးနစ်နစ်ရောက်နေကျသည့်တိုင် လူ့မာနတို့ မလျော့ကြပေ။“မသာမလေး…..မတော်လို့ဖြစ်တာ….ငါ့ကို ပါးရိုက်တယ်ပေါ့….သေပေတော့”တရုတ်ကြီးလည်း လူပေဘဲ ဒေါသ၊မာနနှင့် ယောက်ျားဆိုသော မာနဖြင့် သက်သက်ကိုဖက်သည်။ပထမတော့ သက်သက်အံအားသင့်နေသည်။တရုတ်ကြီးဤမျှလျှင်မြန်စွာသူ့အား ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်မထားခဲ့ပေ။ တရုတ်ကြီးက သက်သက်နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဖိစုပ်လေတော့သည်။တချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာပင် မာတောင်နေသောလီးကြီးက သက်သက်ဗိုက်သားလေးကိုထောက်မိသွား၏။ကူကူး သက်သက်အဖြစ်ကို အသက်အောင့်၍ငေးကြည့်နေရုံမှတပါးဘာမှ မကူညီနိုင်ဖြစ်နေလေသည်။ခဏအကြာတွင်သက်သက်ထံမှ”အင့်”ကနဲ ရှိုက်သံလှိုက်လှိုက်လေးထွက်ပေါ်လာပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲသော မျက်လုံးလေးများကကူကူးအား ဝေရီမှုံဝါးစွာ ကြည့်နေရှာ၏။တရုတ်ကြီးကိုယ်ခန္ဒာမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကောင်းကောင်းစီးဝင်ခံရသော သံမဏိစက်ရုပ်ကြီးအလား တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီးသက်သက်လေးကို အားရပါးရကြီး အီး ကနဲ အီး ကနဲ ပါးစပ်မှအော်ကာညောင့်နေသည်ကို ကူကူး အံလေးကြိတ်ခါ မျက်ရည်များကြားမှ ကြည့်နေမိရလေသည်။
18. တရုတ်ကြီးလက်တစ်ဖက်က ပျဉ်ချပ်ကို မြဲမြံစွာကိင်ထားသကဲ့သို့ အခြားတစ်ဖက်ကုသက်သက်ကိုယ်လေးကို ကျိုးကြေသွားမတတ် ကိုင်တွယ်ကာ ရေအောက်မှ ဖင်နှစ်ခုဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲညောင့်နေသည်ကို ကူကူးခမျာ မကြည့်ချင်မြင်နေရလေသည်။အသက်(၁၈)နှစ်သာရှိသေးသော သက်သက်လေးသည် အားကစားမှလွဲ၍ ဘာမှစိတ်ဝင်စားခဲ့သူမဟုတ်ချေ။ယခုကဲ့သို့ အန္တရာယ်ကြားတွင် အဓမ္မအကျင့်ခံနေရခြင်းမှာနှမြောဖွယ် ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလှချေတော့သည်။”အဟီး….အဟဲဟဲ..ဟဲဟဲ…….ဝူး ဖလူး မြစ်ရေများကိုပါးစပ်မှ မှုတ်ထုတ်ရင်း တရုတ်ကြီးကသွားဖြဲကြီးနှင့် အားရပါးရကြီးရယ်လေသည်။သူ့ကိစ္စပြီးသွားဟန်တူလေသည်။မျက်နှာကြီးက ကူကူးဘက်သို့လှည့်လာနေသည်။ကူကူးရင်ထိတ်သွားသည်။တရုတ်ကြီးအသွင်မှာ အသက်အန္တရာယ်ကိုသတိမရနိုင်တော့ဘဲ ကာမမီးတောက်နေသော မျက်လုံးကြီးများဖြင့် ကူကူးထံသို့တရွေ့ရွေ့ချဉ်းကပ်လာနေပေသည်။ကူကူးအတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ရှားရှောင်ဖယ်သော်လည်း သန်မာသော တရုတ်ကြီးလက်တစ်ဖက်က နို့လေးကို မိမိရရလှမ်းဆွဲခြင်းခံလိုက်ရသော တခဏတွင် ကူကူးမျက်စိ့လေးများပြာဝေသွားလေသည်။ ရေအောက်ထဲတွင် တွန်းထိုးလှုပ်ရှားနေသော ဖင်ပိုင်းကို မိမိရရကြီးခွယူကာလီးကြီးက ကူကူးပေါင်ကြားသို့ တိုးဝင်ဖိသွင်းလာသည်။ကူကူးဖင်ကိုလိမ်ရှောင်နေသည်မို့ လီးကြီးက ရုတ်တရက်မဝင်ပဲဖြစ်နေရာ တရုတ်ကြီးက စိတ်မရှည်သောဟန်ဖြင့် ကူကူးတစ်ကိုယ်လုံးကို လှမ်းဖက်ရန် ဗောမှလက်ကို လွှတ်လိုက်လေ၏။ကူကူးမျက်စိကို တင်းကနဲ ပိတ်ထားမိ၏။ သို့သော် တရုတ်ကြီးသူ့ထံသို့ ရောက်မလာ မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ သက်သက်နှင့်တရုတ်ကြီးတို့ လုံးထွေး၍ လှိုင်းတွေကြားတွင် နစ်မြုပ်သွားသည်ကိုကူကူးနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရလေသည်။ “သက်သက်……………သက်သက်…”
19. အာခေါင်ခြစ်၍ စူးစူးရှရှအော်လိုက်သော ကူကူးအသံလေးမှာ အခြားသော ကယ်ပါ…ယူပါ…. အသံများနှင့်အတူ လှိုင်းလေအသံများကြားတွင် နစ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ “သူငယ်ချင်းအတွက် အသက်ပေးသွားတာလား သက်သက်ရယ်…….” ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀“ဟာ……အဖြစ်တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပဲ ကျော်သီဟ”“ဒါနဲ့ မင်းဆော်လေး ဟို……ရီလေးနွယ် ကရော……”“သင်္ဘောနစ်ပြီဟေ့ ဆိုကတည်းက လူတွေကရောထွေးကုန်တယ်….အချို့ကအရမ်းဖက်ထားကြတာလေ ဗော့ကွင်းတစ်ခုယူပြီး ရီလေးနွယ်ပဲဆိုပြီး လက်ဆွဲသင်္ဘောပေါ်ကခုန်ချခဲ့တာ…”“ရီလေးနွယ် မဟုတ်ဖူးပေါ့”“မဟုတ်ဖူး…..တစိမ်း မိန်းခလေးတစ်ဦးဖြစ်နေတယ်”“ဟာ……..မနေ့ကတော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ဆယ်လာတဲ့ အလောင်းတွေသွားကြည့်တယ်….”“မင့် ရီလေးနွယ် ပါလာ လား….” “အင်း……ရီလေးနွယ်ဝတ်ထားတဲ့ ရွက်လှေဒီဇင်းနဲ့အင်္ကျီတစ်ခုကလွဲပြီး ကိုယ်က ပွယောင်းနေတော့ သူ့မိဘတွေကရေိာုရီလေးအလောင်းကို သိပ်မမှတ်မိကြဘူး”“ဟား…….စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ…”“ပန်းလျသောနှုတ်ခမ်းအစုံကို ဟားကနဲ ဖွင့်ပြီး မျက်လုံးအစုံကိုမှေးမှိတ်ခါ ကုလားထိုင်နောက်မှီပေါ်သို့ ခေါင်းကိုတင်ပြီး ညီးညူလိုက်သော နန္ဒာအောင် အား ဝင်းနောင်
20. တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။“ညစ်တယ်……ငါလဲညစ်တာပဲ ဒါပေမဲ့ အချစ်ကို လျှပ်တပျက်အရှုံခံလိုက် အဆုံးခံလိုက်ရလို့ ထိုင်ပြီးလွမ်းနာကျရမဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ဘဝကို ငါလက်မခံဘူး”“မင်းက ငါ့ဘက်မျှားဦးလှည့်တာပေါ့လေ”“ဟုတ်တယ်……….မင်းလိုပဲ ခံစားနေကြရတဲ့ အဖြစ်တွေလောကကြီးမှာ ဒုနဲ့ဒေးရှိတယ်ရင်ထဲက ဝေဒနာကိုအနုပညာပုံရိပ်တွေအဖြစ် ဖန်တီးယူတတ်ခြင်းဟာ ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးတာပဲ” “အင်းပါ….သူဌေးမင်းရယ်…..မင်းငှားပေးထားတဲ့အိမ်ကြီးမှာဘဲငါသွားနေပြီးပန်းချီကားတွေဆွဲပါတော့မယ်”“အေးပါ…….အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ အသက်ရှင်စမ်းပါ နန္ဒာရယ်…” ဝင်းနောင်ကခိုင်မာသန်စွမ်းသော ယောက်ျားကြီးစိတ်ဓါတ် အပြည့်အဝ……နန္ဒာအောင် ရင်တွင်းသို့သွတ်သွင်းပေးခဲ့လေသည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀သည်နေရာက………အလွန်သာယာသည်။ကျိုက်ခေါက်စေတီမှ ဆည်းလည်းသံလွင်လွင်ကိုလည်းကိုလဲ မပြတ်ကြားနေရတတ်သည်။သန်လျင် ဘီအိုစီကျော်၍ဖွေးဖွေးလက်လက် ပင်လယ်ဝကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ဤလွမ်းမောဖွယ် မြင်ကွင်းမှာဘဲနာန္ဒာ………နစ်မျောချင်နေ၏။ ဝင်းနောင်…………..တကူးတကရှာပေးထားသော ဤနှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ဝန်းကျယ်ကြီးကိုမူ တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှလွဲ၍ နန္ဒာ သိပ်မနှစ်သက်ချင်။ပန်းနွယ်……ပွတ်လုံးများဖြင့် ခြံရံတည်ဆောက်ထားသော အိမ်ကြီးအသွင်အပြင်က အိမ်တစ်ဆောင်ထက် ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းနှင့် ပိုမိုနီးစပ်နေသည်ထင်၏။တဟဲဟဲတောတိုးသံကြီးများ အဆက်မပြတ်ကြီးစိုးနေသော ဝါးရုံ၊သီဟိုဋ္ဌ်၊သရက်၊သြဇာ၊
21. မာလကာများ စုရုံးရောနှောပေါက်ရောက်နေသော ခြံဝန်းကျယ်ကြီးအလယ်တွင်ရေနံဝနေသော အိမ်ကြီးအသွင်က ခြောက်ခြားဖွယ်ပင်။“ဆရာလေး…..တစ်ယောက်ထဲ နေရဲရဲ့လားဗျာ…..”ထမင်းချက်အဖိုးကြီး ဦးစံအေးက နန္ဒာ့ကို မေးလိုက်၏။“ကျနော့်အတွက် တစ္ဆေ……သူရဲဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထဲမှာဘဲ ရှိတာလို့သိထားသူဆိုတော့ ဘယ်နေရာမဆို ကျနော်နေရဲပါတယ်…..ဘကြီးစံအေး…” သည်တုန်းက ဦးစံအေး သက်ပြင်းကြီး တချက်ရှိုက်လိုက်သံကို နာန္ဒာအောင်ခပ်သဲ့သဲ့ကြားခဲ့၏။တောနေလူတန်းစားတို့သဘာဝ ဝိညာဉ်ကို ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ထမင်းချက်ဦးစံအေး ပြန်သွားလျှင်…..နန္ဒာတစ်ယောက် ပန်းချီဆွဲချင်ဆွဲမည်…..သို့မဟုတ် ဝင်းနောင် ဟိုတစ်ခေါက်လာစဉ်က ယူလာသော ဆန်နီအမျိုးအစားကက်ဆက်ကြီးကိုဖွင့်၍ မာမာအေးဖြစ်ဖြစ် ကိုတင်လှိုင်ဖြစ်ဖြစ် နှလုံးသားရသအပီအပြင်သီချင်းလေးများ တိုးတိုးညင်ညင်သာသာလေး ပျံ့လွင့်ခံစားနိုင်ရန်ဖွင့်ထားရင်း မှိန်းနေမည်။ ဤသို့သော သီးခြားအနုပညာကမ္ဘာလေးကို ပြည့်ဝစွာတည်ဆောက်နိုင်ရန်ဝင်းနောင် စီစဉ်ပေးထားခဲ့၏။ဝင်းနောင်သည် တကယ်တော့ နန္ဒာအောင်၏ကျေးဇူးရှင်……သူ့အလိုကျ အသက်ဝင်သော ပန်းချီကားချပ်လေးများရေးဆွဲ ပေးရမည်က…..နန္ဒာ့တာဝန်……ထို့ကြောင့် သာမန် အရောင်အသွေး အမြင်အယူအဆတွေထက်ဆန်းသစ်သော ပန်းချီကားမျိုးကိုသာ နန္ဒာရေးဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ယခုလဲ အပေါ်စီးမှ ဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ် မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့စွာပွင့်နေသောစကားပင်ကိုဇတ်ကောင်ထား၍ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရေးဆွဲရန် ခဲဖြင့် ကောက်ကြောင်းရေးဆွဲရင်း ဟိုးအဝေးသို့ငေးမိခြင်းဖြစ်သည်။ရန်ကုန်မြစ်ဝမှ လှေသင်္ဘောများကိုသေးကွေးစွာတွေ့ရသည်။
22. တစ်ချိန်က……..ရှင်မွေးလွန်းဆိုသော သူငယ်မလေး မင်းနန္ဒာအား ဒဂုံဘက်ကမ်းသို့မျှော်နေလျှင်လဲ ဤသို့ပင် မှုံမှုံရီရီပင် တွေ့ရလိမ့်မည်ထင်သည်။အော်….ဝေဝါးမှုံရီသောမြင်ကွင်းကြားမှ ချစ်ရသူကို တမ်းတလွမ်းမျှော်ရခြင်းဝေဒနာကို ရှင်မွေးလွန်းခမျာခါးဆီးခံခဲ့ရရှာပေသည်။ နန္ဒာအောင် ရှင်မွေးလွန်းကို ကိုယ်ချင်းစာမိသည်။ဤသို့နှယ်ချစ်ရသူကို လွမ်းတရသော သောကဝေဒနာမျိုး နန္ဒာအောင်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးသည်လေ။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀“ကသစ်ကုန်းကို ပြန်ထွက်မှာလား ဘကြီး”“မထွက်တော့ဘူး ကောင်လေးရဲ့….မိုးတွေကျလာပြီ….” နန္ဒာအောင် ကျောင်းလွယ်အိတ်ကို ပိုက်လျက် ကမ်းတန်းမှကျောင်းရှိရာသို့ ပြန်လှည့်ပြေးခဲ့ရသည်။ကျောင်းတက်ရသည်မှာ ဒုက္ခရောက်လှသည်။(၈)တန်းအောင်ပြီးမြို့ကျောင်းကို တက်ရသည့်အချိန်မှစ၍ နန္ဒာ့ကဲ့သို့ ဒုက္ခကြုံတွေ့ရသူ သုံးလေးဦးရှိသည်။သည်အထဲ”ကသစ်ကုန်း”မှ အလုပ်လာလုပ်ကြသူတွေလည်းပါသည်။ မိုးမစဲသေးသဖြင့် ရပ်ပြီး ကွမ်းယာဆိုင်တွင် မိုးခိုရင်း ကသစ်ကုန်း ကိုထွက်မည့်လှေကိုရှာနေမိသည်။ထိုစဉ် ရန်ကုန်မှ ဘတ်(စ်)ကားတစ်စင်းဆိုက်လာသည်။ကားပေါ်မှ ထီးများ မိုးကာများဆောင်း၍ နီးစပ်ရာဈေးဆိုင်များအတွင်းသို့ ခရီးသည်များအပြေးဝင်ကုန်ကြသည်။“ကသစ်ကုန်း သွားတဲ့လှေဆိပ် ဘယ်နားမှာလဲ..ဟင်” အသံကိုကြားရုံမျှဖြင့် နန္ဒာစိတ်ဝင်စားခဲ့ရလေသည်။ချောယဉ်သော မမ၏အလှက နန္ဒာအောင် နှလုံးသားကိုကိုင်လှုပ်ရမ်းပြစ်နေသည်။
23. ဝင်းပ ရွှမ်းစိုသော မျက်နှာလေးမှ အပြုံး…..။ပြုံးလေတိုင်းခွက်ဝင်သွားသော ပါးချိုင့်လေးနှစ်ဘက်၊ကနုကမာသွေးဖြူစင်သောသန္တာသွယ် သွားလေးများ ဝင်းဝင်းဝိုင်းဝိုင်းမျက်ဝန်းနက်လေးများ၊ပါးမို့မို့…..လွင်လွင်….ရင်အလှမှ ကားစွင့် ဖွံ့ထွားလှသော တင်ပါးသားဝိုင်းဝိုင်းကြီးများကမိုးရေရွှဲစိုကပ်နေကြသည်။“ ငါ့တူမက ဘယ်သူ့အိမ်သွားမှာလဲကွဲ့” ထုံးစံအတိုင်း ကွမ်းကုန်သည် ဒေါ်စပ်စုကမေးလေသည်။“ဦးအောင်ရင်၊ဒေါ်မြရင်တို့အိမ်ကို သွားမလို့ပါ”“အော်……ဒါသူတို့ သားလေးလေကွယ်….သူလဲ ရွာကိုပြန်မှာ….” မမမျက်လုံးများ နန္ဒာအောင်ကို စူးစမ်းကြည့်လျက် “ကျမ မမှတ်မိတော့ဘူးနန္ဒာက လူကြီးဖြစ်နေတာကိုး” နန္ဒာအောင်သည်အထိ စကားပြန်ပြောရကောင်းမှန်းမသိမမ…….အလှတွင်သာ ရင်တခုံခုံ မိန်းမူးနေသည်။ “နန္ဒာ……..မမကိုမှတ်မိလား..ဟင်….” မမမေးခွန်းလေးထဲတွင်မျှော်လင့်ချက်လေးများ ရောစွက်နေသည်မို့……..မမှတ်မိဘူး” ဟုဖြေရမှာ နန္ဒာအားနာနေမိ၏။“အေးလေ……မင်းက မှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး…..မမ…ရွာကထွက်သွားတာပဲ(၁၀)နှစ်ကျော်နေပြီ…..ဟာပဲ…” မမရွာကထွက်သွားတာ (၁၀)နှစ်တောင်ဆိုပါလား……..နန္ဒာအတွေးအာရုံထဲနစ်မျောနေစဉ်…..”ဟဲ့……နန္ဒာ…ဟိုမှာ ကိုခွေးရဲ့လှေ…ရွာပြန်မလို့တဲ့ မင်းတို့မောင်နှမတွေ လိုက်သွားကြလေ”
24. ဒေါ်စပ်စုကို ကျေးဇူးတင်ရမည်။မမ၏ခရီးဆောင်သားရေအိတ်ကလေးကိုဝိုင်းဆွဲကိုင်ပေးရင်း လှေဆီသို့ ဆင်းခဲ့ကြ၏။မိန်းမဆောင်းထီးလေးတစ်လက်ကိုမမ….ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးလေးဖြင့် ပထမဆုံး ပူးပူးကပ်ကပ် နေရသည့် အတွေ့အကြုံမှာနန္ဒာအောင်အတွက် တစ်သက်လုံး မေ့မရနိုင်သည့် အထိအတွေ့ ဖြစ်သည်။ “အရမ်းချမ်းနေလား…..မောင်လေး……ဟင်..”“အင်း…ဟင်း….ဒီနေ့မှ….မိုးကာ……မေ့ကျန်ရစ်တယ်….” မမက တမင် ပူးကပ်တိုးပေးရင်း ဂရုဏာစိတ်ဖြင့် ထီးမိုးပေးသည်ကို ငအောင်တို့ ဖေါက်ပြန်လိုက်ပုံကလီးတောင်နေ၏။မတတ်နိုင် ပေါင်နှစ်လုံးဖြင့် လီးပူပူကြီးကို ဖိညှပ်အုပ်ထိန်းထားရင်းစိတ်ကို မနည်းငြိမ်အောင်ထားနေခဲ့ရသည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀မမ…….ငအောင်တို့အိမ်တွင် တစ်လကျော်ခန့်အထိ နေရင်း ပညာရေးဌာနမှကျလာမည့် အလုပ်ခန့်စာကို စောင့်နေခဲ့သည်။ကသစ်ကုန်း မူလတန်းတွင်လည်းစေတနာဆရာမအဖြစ် လုပ်အားပေးရင်း အမေတို့နှင့်လည်း ကောက်စိုက်ဆင်းလိုက်သွားတတ်သေးသည်။မမမှာ အမေ့သူငယ်ချင်း ဒေါ်တင်အုန်း၏သမီးဖြစ်ပြီးမိခင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားသဖြင့် အမေ့ထံတွင် တစ်လမျှ နေခဲ့သေးသည်ဆို၏။ထိုစဉ်က နန္ဒာအောင်က (၄)နှစ်သားလောက်ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း အဖွားအိမ်တွင်အနေများခဲ့သည်။အမှတ်မထင်ဘဲ တစ်အိမ်ထဲအတူနေရသော မမကို နန္ဒာအောင်သနားပြီး သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ရ၏။နန္ဒာအောင်အပေါ်တွင်လည်း မောင်အရင်းပမာဂရုစိုက်ပြီး စာပြပေးတတ်သဖြင့်လည်း ရင်းနှီးမှုမြန်ခဲ့ကြ၏။တစ်နေ့ နန္ဒာအောင်အိမ်သာတက်နေစဉ် မမ အမှတ်တမဲ့ အိမ်သာတံခါးလာဖွင့်တာ လန့်အော်ခဲ့ရသည်။ “အမလေး….လန့်လိုက်တာဟယ်……နန္ဒာကလဲ…” အိမ်သာထဲမှာရှိနေသည်က နန္ဒာတံခါးလာဖွင့်သူက မမဖြစ်ပြီး သူကပင် လန့်နေလေတော့သည်။
25. “မမကလဲ ကျနော်ကလန့်ရမဲ့ ဟာကို…..ဟား..ဟား…”“ခွေးလေး….လူရှိတယ်လို့ အသံပေးပါလား…….ဟွန်း….ခုတော့ ရင်တွေကိုတုံသွားတာပဲ…..ဟင်း…..” မမမျက်နှာလေး နီမြန်းပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တုံနေသည်။ထိုနေ့မှစ၍ မမ……..နန္ဒာ့ကို မသိမသာ ခပ်ရှောင်ရှောင်လုပ်တတ်၏။တစ်ခါတလေလဲငေးတေးတေးလေး တွေးနေတတ်သည်။ထိုနေ့က မိုးသည်းထန်နေသည်။မနေ့ကကောက်စိုက်လိုက်သွားပြီး အအေးပက်အဖျားဝင်နေသဖြင့် အိမ်တွင် မမနှင့် ကျနော်ပဲရှိနေသည်။အဖေနှင့်အမေကလယ်ထဲ ဆင်းသွားခဲ့ကြသည်။“ဟင်း…ဟင်း….ချမ်းလိုက်တာ….ဟင်း..ဟင်း…”“မမ”…လူမှန်းမသိအောင်ဖျားနေသည်မို့ နန္ဒာဆေးတစ်ခွက်ဖျော်တိုက်ခဲ့သည်။အိမ်ရှေ့တံခါး၊ပြတင်းပေါက်များကို လိုက်ပိတ်လိုက်သည်။မိုးက လေနှင့်ရော၍သည်းထန်စွာတိုက်နေသည်။အိမ်ရှေ့ ရေတံလျောက်မှ ရေကျသံမှာ အုန်းအုန်းနဲ့ဆူညံနေ၏။“ကျနော်….ခြင်ထောင်ချလိုက်မယ်နော်….မမ…လေတွေက အရမ်းတိုက်နေတာ….ဆေးထပ်သောက်အုံးမလား…ဟင်…….မမ….”စေတနာတွေပိုနေမိသော နန္ဒာအောင် အမှတ်မထင် ခြင်ထောင်ချလိုက်သည်။ခြင်ထောင်ထဲတွင် မမနှင့် နှစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေသည်။နန္ဒာ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေမိသည်။မမက ဂွမ်းစောင်ကိုခြုံထားရင်း မမကိုယ်ပေါ်တွင် ဟိုမှ သည်မှဖြတ်သန်းလှုပ်ရှားနေသော နန္ဒာအောင်ကို မလှုပ်မယှက်လိုက်ကြည့်နေ၏။ မမမျက်နက်ဝန်းလေးများမှာ အရည်လဲ့နေသည်။အဖျားကျသွားသော်လည်း မမ….မလှုပ်မရှားချင် ဖြစ်နေဟန်တူသည်။“နန္ဒာ……ကျောင်းမသွားရဘူးလား…ဟင်” “မသွားတော့ပါဘူး……ဘယ်လှေမှလဲ
26. လိုက်ပို့မှာ မဟုတ်ဘူး……” အိမ်အပြင်တွင် ဝူးကနဲ….ဝေါကနဲ လေကဆောင့်တိုက်နေ၏။“ မိုးတွေ လေတွေနဲ့ ဒေါ်လေးတို့ပြန်လာဖို့ ကောင်းတာ.....”“လမ်းမှာ မိုးခိုတဲလေးရှိတယ်လေ…..တစ်ခါတစ်လေ မိုးတွေ အရမ်းသည်းနေရင်အဖေနဲ့အမေ အဲဒီတဲမှာဘဲ တစ်နေကုန်အိပ်ပြီးမှ ပြန်လာကြတာ မမရဲ့…”“…..အိုး……” မမက ဘယ်လို အတွေးပေါက်သွားတယ် မသိဘူး။ ….အိုး….ကနဲငြီးတွားရင်း တဖက်ကိုစောင်းရင်း ပြုံးယောင်ယောင် လုပ်နေတယ်….နန္ဒာပြောတဲ့ စကားထဲမှာ ဘာမှ အထူးအဆန်းမပါတာတော့ အမှန်ပဲလို့ ထင်တယ်။“နန္ဒာ ခြင်ထောင်ထဲက ထွက်တော့လေ…” “ဟာ…အပြင်က အရမ်းချမ်းတယ် မမရဲ့..မမနားမှ နေတာကမှ သက်သာအုံးမယ်…..အဟင်း…” အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိတဲ့နန္ဒာအောင်……ကို မမ ငိုမလို တောင်းပန်အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ရင်း….“….မကောင်းပါဘူး…နန္ဒာရဲ့…မင်းက ခလေးမှမဟုတ်တာ…..ထွက်ကွာ…”အော် မမဆိုလိုတာကို နန္ဒာ သဘောပေါက်ပြီ “ဘယ်သူမှရှိတာမှ မဟုတ်တာ”နန္ဒာက ပေကပ်ကပ်လုပ်နေတော့ မမက ဆောင့်ဆောင့်အောင့်အောင့်လေး ခြင်ထောင်အပြင်ကိုထွက်တယ်…..သည်မှာတင် တင်ပါးအောင်အထိ လျောကျနေတဲ့ထဘီအောက်က တင်ပါးဖွေးဖွေးကြီးဟာ နန္ဒာ့ကို ဖိတ်ခေါ်တော့တာပါဘဲ….ဖင်အကွဲအစထိ မြင်လိုက်ရတဲ့ နန္ဒာ့ဟာ ကျားရဲလေးတစ်ကောင်လို မမကို ခုန်အုပ်ပြီးအိပ်ယာပေါ်ကို ဆွဲလှဲလိုက်တယ်။ “ဟဲ့…..အို……နန္ဒာ…..အာ…..ကွာ…”မမလည်း ထဘီကိုလုံးထွေးဆွဲတင်ရင်း နန္ဒာ့လက်ကရုန်းကန်ဘို့ ကြိုးစားရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရာဂမီးတောက်ကြီး နန္ဒာ့ကိုအင်အားကြီးမားစေခဲ့ပါတယ်။ မမ
27. အောက်ပိုင်း ဖင်ကြီးတပြင်လုံးဖွေးကနဲ ပေါ်လာပြီး နန္ဒာ့ပေါင်နှစ်ဖက်ခွထားတဲ့အောက်မှာ မလှုပ်သာ မလူးသာ ဖိချထားခြင်းကို ခံလိုက်ရရှာတယ်။“နန္ဒာ…….မောင်လေး….မလုပ်ကောင်းဘူးနော်….မောင်လေး..” မမဟာ နန္ဒာ့ရင်ကိုတွန်းဖယ်ရင်း တတွတ်တွတ်ပြောနေပေမဲ့ အားနည်း ပျော့နွဲ့လွန်းနေပါတယ်။သည်ကောင်လေး ထွားကြိုင်းကြီးမားသော အနေအထားကို မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်သာတွင်တစ်ကြိမ် အိပ်ခန်းထဲတွင် အိပ်နေစဉ်တစ်ကြိမ် မြင်ဖူးပြီးပြီ။ လူပျိုပေါက်လေးဆိုပေမဲ့ လိင်တန်က လက်ဆော့လွန်းတာကြောင့်ကြီးမားထွးကြိုင်းပြီး ဒစ်ကြီးက နီရဲပြဲလန်နေတာကို တွေ့မိကတည်းက စိတ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်။တစ်ခါတစ်လေ နန္ဒာရေချိုးနေရင်း ပေါင်ကြားကို မသိမသာခိုးကြည့်တဲ့အခါ အမြောင်းလိုက်ခုံးထနေတဲ့ လိင်တန်ကြီးရဲ့ အရွယ်ပမာဏဟာရင်ခုံစရာကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်လေ……….အလှတကာတွေထက် ရင်ခုံစရာ အဆီအနှစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ မမစောက်ဖုတ်ကြီးဟာ စောက်မွှေးလေးပါးပါးနဲ့ ခုံးကြွ မောက်မို့နေတာကိုပထမဆုံးတွေ့ရတယ်။ စောက်ပတ်ကြီးဟာ တစ်ခါမှ အလိုးမခံရသေးတာမို့ ဖြူစင်ဝင်းပပြီးတင်းမာနေတယ်။စောက်စိခေါင်းလေးကအစ မသိမသာခပ်ပြူပြူလေးထွက်နေတယ်။နန္ဒာဟာ မမစောက်ခေါင်းထဲကို သူလီးကြီးကို လိုးသွင်းဖို့ တေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ မမဟာစောင်စကိုဆွဲယူပြီး မျက်နှာပေါ်ကို ဆွဲတင်ဖုံးအုပ်ထားရှာတယ်။ “ပြွတ်” ကနဲလီးဝင်သံနဲ့အတူ……မမ..ဒူးနှစ်ချောင်းဟာ ပြိုင်တူ ဆတ်ကနဲ ထောင်သွားတယ်။“အ….အား…အား…” လို့လဲ ပါးစပ်က တိုးတိုးလေးငြီးတွားတယ်။“ဝင်သွားပြီလား…….မမ….ဟင်….” “အင်း….ဟင်း…ဟင်း.. မျက်နှာကို စောင်စနဲ့အုပ်ထားရင်းက မမဟာ ရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ် ငြိမ့်ပြရှာတယ်။နန္ဒာလေ…မမရဲ့ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးနေတဲ့ အပြုံးလေးကိုမြင်ချင်လာတယ်။လီးကို အဆုံးထိ
28. မသွင်းသေးပဲ ရပ်ထားရင်းက မမစောက်မွှေးလေးတွေကို ဆွဲဆွဲပြီး ဖွကစားနေမိတယ်။“ဘာလုပ်နေတာလဲ……နန္ဒာ…..တော်ကြာ ဦးလေးတို့ ပြန်လာလို့တွေ့သွားရင်……မမ…..ခွေးဖြစ်မှာ သိလား…ဟင်းဟင်း…” စောင်ကြားက အသံလုံးကြီးနဲ့ မမပြောနေတဲ့အသံဟာ ငိုသံတစ်ဝက်စွက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား မောဟိုက်သံကြီးတွေနဲ့လုံးထွေးလို့နေပြန်တယ်။နန္ဒာ……သနားသွားတယ်လေ။“မမကို……နန္ဒာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးယူမှာ…..သိလား…အ…အား” လီးကိုဆက်လိုးသွင်းရင်း ပြောလိုက်တဲ့ နန္ဒာ့စကားဟာ မမအတွက် အမျက်ဖြေလင်္ကာဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ “အင်…..အား….အ..မင်းက ငါ့ကိုယူမယ်….အ…အ…နင့်ကို ငါယူရင့် ငါက ခလေးကို မုန့်ပေးကြိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့….နန္ဒာရယ်…အင့်…အဟင့်…”လိုးနေရင်းက မမ မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်မို့မို့ပေါ်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာကြတယ်။ “မမ..ရယ်……နန္ဒာ…မမ့ကို တကယ်ချစ်တာပါ….”“….ပြွတ်….ပြလွတ်….ပြွတ်….စွတ်….စွတ်….ပြွတ်….” အဆက်မပြတ်ဆောင့်ထဲ့လိုက်တဲ့ နန္ဒာ့ဆောင့်ချက်က ပြင်းထန်လေတာမို့ မမစကားမတုံ့ပြန်နိုင်ရှာပါဘူး။“….အင့်….အ……အဟင့်…..အွန့်….အင့်…..အား…လား….”မမရဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးဟာ…….နန္ဒာ့ကိုယ်ကို တစ်ခါတလေညှပ်ပြီး တင်းတင်းကြီးဆွဲညှစ်ထားတယ်။လက်နှစ်ဖက်က စောင်ကြီးကို ဆွဲယူပြီး မျက်နှာကို အုပ်ထားတာမို့နန္ဒာဆွဲဖယ်လိုက်တယ်။“ဟင့်အင်း..ကွယ်…..မမ….ရှက်တယ်…..ဟင်…အင်းဆို…..”့ မမဟာစောင်ကို အတင်းပဲ ဆွဲကပ်ထားတာမို့ နန္ဒာဆောင့်ဆွဲပြီး ခွာပြစ်လိုက်တယ်။
29. အခုနက အရှက်မျက်နှာ ဒေါသတွေနဲ့ စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေ ခြောက်နေပါပြီ။အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ဖိဖိလေးကိုက်ရင်း…..နန္ဒာ့ကို မျက်လုံးလေးမှေးကြည့်နေတဲ့ မမ…….မျက်နှာလေးဟာ အသဲပြင်မှာ တသက်တာ ဖျက်မရအောင်စွဲထင်ခဲ့ရတော့တယ်။“ကောင်းလိုက်တာ….မမရယ်….နန္ဒာ….ပထမဆုံး လုပ်ဖူးတာ..”“ဟိတ်…..ဒါ…….အမကို ပြောတဲ့စကားလား…….သွား….”“မမက နန္ဒာ မယားဖြစ်သွားပြီပဲ ဥစ္စာ….”“ကျွတ်…..ကျွတ်…..နန္ဒာ……အရမ်း စကားများတာပဲ…..မြန်မြန်လုပ်…” မြန်မြန်လုပ်လို့ပြောရင်း မမဟာ အောက်ကနေပြီး သုံးလေးချက်လောက်ကော့ဆောင့်လိုက်တာမှာ နန္ဒာ့ ဆီးစပ်တစ်ခုလုံးကျင်စိမ့်သွားပြီး ဘယ်လိုက ဘယ်လိုအရေတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတာတောင် နန္ဒာ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။ မမဟာလဲ နန္ဒာ့ဖင်ကြီးကို တအားဆွဲယူကော့ဆောင့်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ကော့လိမ် တွန့်ပျံပြီး အားရပါးရကြီး ခံလိုက်တော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့……….မမရဲ့ ပါးပြင်က ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စီးကျလာတဲ့မျက်ရေဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲလို့ နန္ဒာ……အဓိပ္ပါယ် မကောက်မိခဲ့ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲ မြန်တဲ့ မမဟာ….အခုနလို ရှက်ရွံ့ရွံ့လေး မဟုတ်တော့ပဲနန္ဒာ့ရှေ့မှာ ဖင်ကြီးပြောင်နေအောင် လေးဘက်ကြီးထောက်ပေးပြန်တာမို့ပြူးထွက်လာတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို နန္ဒာ……ဒုတိယအကြိမ်လိုးမိပြန်တယ်။အဲ……….သည်လို အကြိမ်ကြိမ်…….စိတ်ရှိတိုင်းလိုးပြီးမှ မမဟာ နန္ဒာ့ခေါင်းလေးကိုနို့ကြီးနှစ်လုံးကြားမှာ ဖိကပ်ထားပြီး…..အင့်ကနဲ….အင့်ကနဲ ရှိုက်ငိုခဲ့ပြန်တယ်….။